पहिरोमा पुरिएर २ जनाको मृत्यु, घाइते ५ जनालाई काठमाडौँ ल्याइयो ! - पहिरोमा पुरिएर २ जनाको मृत्यु, घाइते ५ जनालाई काठमाडौँ ल्याइयो !
पहिरोमा पुरिएर २ जनाको मृत्यु, घाइते ५ जनालाई काठमाडौँ ल्याइयो !
२०७५, ३१ भदौ, 03:23:03 AM
रसुवा । शनिबार राती गएको पहिरोमा परी रसुवामा दुई जना कामदारको ज्यान गएको छ । अरु ९ जना घाइते भएका छन् ।